Uhambo oluya e-Okinawa, eJapan elishisayo | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Iziqondiso
Isithombe sendabuko esinaso seJapan ngezintaba, i-geisha, izitimela ezihamba ngokushesha, nezixuku, kepha akupheleli lapho. Uma ubhekisisa ibalazwe uzothola iqembu leziqhingi ezikude neziqhingi ezinkulu ezakha i- Isifunda sase-okinawa.
Uma uwuthanda umlando wezwe uzokhumbula ukuthi izimpi ezinegazi zenzeka lapha phakathi neMpi Yesibili, kepha ngale kwesahluko esibuhlungu lesi sifunda sithathwa iCaribbean yaseJapaniziqhingi zepharadesi, amabhishi amahle, ukushisa unyaka wonke nomoya okhululekile okumema ukuthi uphumule futhi ujabule. Kepha kuneziqhingi eziningi kakhulu ukuthi njengabantu bakwamanye amazwe asikwazi ukukugwema ukukhathazeka kancane, yini esivakashelayo?
2 Uzoya nini e-Okinawa
3 Ungafika kanjani e-Okinawa
4 Yini ongayivakashela e-Okinawa
Akusona isiqhingi esisodwa kodwa sisonke iziqhingi yakhiwa iziqhingi eziningi, ezinkulu nezincane, ezakhiwe nezinezidlanzana. Abantu lapha bakhuluma ulimi oluthile futhi banamasiko abo ahlukile kunaphakathi neJapan futhi lokho kunencazelo: U-Okinawa isikhathi eside wayengumbuso ozimele. Kwakungumbuso waseRyukyu futhi ngaleso sikhathi wawubalwa iziqhingi eziyikhulu ezishisayo ezisendaweni engamakhilomitha angama-700 ukusuka eKyushu kuya eTaiwan.
Isimo sezulu saso esihle senza lezi ziqhingi zaba Indawo edume kakhulu ngamaholide ehlobo yamaJapan. Uma sengeza iqiniso lokuthi zixhunyaniswe kahle namadolobha abaluleke kakhulu (iTokyo, iHiroshima, i-Osaka, iNagasaki, njll.), Ezandleni zethu indawo esiya kuyo mhlawumbe ayivamile kakhulu kubavakashi bakwamanye amazwe kepha kunconywa kakhulu uma uya lapho uya khona yiJapan ehlobo.
Uzoya nini e-Okinawa
Isimo sezulu salezi ziqhingi singaphansi komhlaba futhi lokho kusho ukuthi kuyashisa unyaka wonke, ngisho nasezinyangeni zasebusika, yize kungakweluleki ukuthi kungayi ngoJanuwari noma ngoFebhuwari ngoba yize kungu-20ºC kunamafu futhi kupholile ukungena olwandle. Phakathi kokuphela kukaMashi no-Ephreli isikhathi esihle, kepha kufanele ugweme lokho okubizwa ngokuthi yiGolden Week okulandelana kwamaholide aseJapan ngoba kugcwala kakhulu.
Isikhathi semvula siqala ngoMeyi ekuseni futhi ihlala kuze kube sekupheleni kukaJuni ngakho-ke akuyona into elula ngoba imvula ina nsuku zonke. Ihlobo lihlala lishisa futhi kunomswakama, kepha isizini yabavakashi kakhulu ngoba ngemuva kwalokhu inkathi yesishingishane futhi lokho kuyabethusa abantu.
Ungafika kanjani e-Okinawa
Kumele kushiwo lokho izindiza eziningi ezingabizi kakhulu zinezindiza ezixhumanisa enkabeni yeJapan neNaha, inhlokodolobha yesifunda sase-Okinawa. Lezi zindiza zilula kakhulu ngoba zingaba cishe ngama-euro angama-90 noma ngaphansi futhi okwethu abokufika, kunikezwa okuhle ukuthi singathenga ngaphandle kweJapan.
Ukuncintisana nalezi zinkampani zezindiza, izinkampani ezinkulu kakhulu zinamathikithi akhethekile aqala ukuthengiswa, ngokujwayelekile, ngoJanuwari (njalo ecabanga ngohambo ehlobo), kepha uma uvakashela amawebhusayithi wezindiza ezindiza kancane uzothola okuningi kunalokho okunikezwayo okuthakazelisayo unyaka wonke. Ngikhuluma ngezinkampani ezinjengePeach Aviation, ngokwesibonelo, ngamanani aqala ku- $ 30. Ukuthengiselana!
Izindiza zikushiya kakhulu eNaha, naseziqhingini zase-Ishigaki naseMiyako. Uzibuza ngezikebhe? Azikho izikebhe eziningi, zehle kancane eminyakeni yamuva futhi amabanga phakathi kweziqhingi eziphakathi ne-Okinawa makhulu kakhulu ngakho indiza ilula kakhulu. Ngisho nezikebhe eziphakathi kweziqhingi eziseduze azivamile, futhi izindiza ziyafika zidlule njengezinto zokuhamba ezivame kakhulu.
Yini ongayivakashela e-Okinawa
Uma ufika ku- INaha, isiqhingi esiyinhloko seqembu sinezinto eziningi ezihehayo futhi igxila empilweni ejwayelekile yedolobha, kepha kulula impela ukusishiya ngemuva kwezinsuku ezimbalwa ngoba uma ufuna ubuhle beCaribbean kufanele uye kwezinye iziqhingi.
I-Las Iziqhingi zaseKerama, isibonelo, bayindawo enhle. Bacishe babe ngamakhilomitha angama-30 ukusuka eNaha, bayiziqhingi eziseduze kakhulu: iziqhingi ezinkulu ezingama-20 neziqhingi zesihlabathi namakhorali ezenza iposikhadi elihle nendawo enhle yokuhamba ngokutshuza futhi uthinte i-snorkeling. Isikhathi esithile manje, ezokuvakasha zikhule ngenxa yokumiswa kwezikebhe ezisuka eNaha ziye eYayeyamas naseMiyako Islands, ngakho-ke uma kukhulunywa ngokwenza ukuvakasha okufushane abantu bakhetha ukuza lapha.
Ezinye iziqhingi eziseduze naseNaha yizo Iziqhingi zase-Iheya, isiqhingi esinomlando namasiko amaningi, futhi cha, exhunywe kweyokuqala ngebhuloho. Uma ufuna umlando omncane wase-Okinawan, lezi ziqhingi ezimbili ziyizindawo ezinhle. Enye into ongayazi ukuthi i- Umzila odabula ulwandle o UKaichu-doro. Kuyinto umzila wabavakashi ecishe ibe ngamakhilomitha amahlanu ubude oxhumanisa iNhlonhlo Yokatsu esiqhingini esiphakathi esiyixhuma neHenza Island. Kuyindlela engcono kakhulu ongayenza ngemoto.
Enye indawo lapho uya khona yi- Isiqhingi sase-Ishigaki-Jima futhi ukusuka lapho ungathola ngesikebhe uye e- Isiqhingi saseTaketomi. the Isiqhingi saseKumejima Kungamakhilomitha angama-90 kuphela futhi unikeza umzila wamabhishi amancane amahle, okuhle kakhulu yiHatenohama, yize ingafinyelelwa ngokuvakasha kuphela. Ufika kanjani kulesi siqhingi? Ngezindiza, kunezindiza eziphakathi kweziyisithupha kuya kweziyisishiyagalombili zansuku zonke, izindiza ezihhafu kuphela zehora, ukusuka eNaha noma esikhumulweni sezindiza saseHaneda ehlobo kunendiza eyodwa eqondile ngosuku. Isikebhe esivela eNaha sinikela ngezinsizakalo ezimbili ngosuku ezihlala isikhathi esingaphezu kwamahora amane.
Uma sesiqhingini singaqasha imoto, isithuthuthu noma ibhayisikili. Ngaphandle kwalokho, kukhona ezinye iziqhingi okuyigugu kodwa yize aziwa futhi enconywa abekho ndawo eduze kwaseNaha. Ngikhuluma ngani iMiyako, isibonelo, ipharadesi, ngeshwa, eliqhele ngamakhilomitha angama-300. Isikebhe asisasebenzi ngakho ukuphela kwendlela yokubazi ukuthi bafike ngendiza.
Umbuzo yilokhu: uma unesikhathi esincane, kungakuhle ukuthi uzinze eNaha, ukujabulele cishe izinsuku ezintathu bese ugxumela kwesinye isiqhingi esiseduze ukuze uxhumane kakhulu nemvelo enhle yale ndawo. INaha inikeza impilo yasebusuku, okuhehayo okungokomlando, i-gastronomy, kanye nokunethezeka kwedolobha elijwayelekile laseJapan. Zonke ezinye iziqhingi, yize zinabantu abanokuphila okwazo, zinokunikezwa kwemvelo okuningi.
Uma unesikhathi esithe xaxa, okuhle ukuchitha izinsuku ezimbalwa eNaha bese uhlala ngqo kwesinye salezi ziqhingi ezikude nezinhle, kepha sikhuluma isikhathi esingaphezu kwesonto lokuhlala, into engajwayelekile lapho usohambweni EJapan.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Iziqondiso » Uhambo oluya e-Okinawa, eJapane elishisayo
Amabhishi amahle kakhulu eMelbourne